Mandritra ny valanaretina, antenain’i El Salvador ny hanome aina vao ny sehatry ny fizahantany ampiarahana amin’ny fanovàna endrika ny vakoka nentindrazana · Global Voices teny Malagasy
Ny sehatra fizahantany no tena voadona mafy nandritra ilay valanaretina
Voadika ny 25 Oktobra 2020 17:28 GMT
Sary an'ny Ministeran'ny Fizahantany ao El Salvador (sehatra ho an'ny daholobe).
Ny 7 Oktôbra, natomboky ny minisitry ny fizahantany ao Salvador, Morena Valdez, ny fandefasana ilay fango vaovaon'ny fizahantany “El Salvador” izay aingampanahy avy amin'ny asa sy taokanton'i Fernando Llort. Natao io endrika vaovao vao avy notefena io mba hampiroboroboana ireo toerana fitodian'ny mpizahatany miaraka amin'ny fotokevitra fanomezana marika hoe Surf City.
Ny marika vaovao “El Salvador” dia ezaky ny fitantanan'i Bukele hanosehana ny fizahantany sy ho fanasongadinana ireo zavatra rehetra azon'ny firenena atolotra, toy ireo tanàna voaravaka loko, ireo torapasika, ireo toerana fanaovana fikarohana ny rakitry ny ela (arkeôlôjika), ary ny asatanana.
Fifanarahana iray teo amin'ny Llort Foundation “Árbol de Dios” sy ny Ministeran'ny Fizahantany no nahaforonana azy io. Omen'ilay fifanarahana alàlana ny ministera mba hampiasa ny taokanton'ny Llort, toy ny lettering avy aminy, ho apetaka amin'ilay fango vaovaon'ny marika El Salvador.
Fernando Llort dia artista madinika iray avy ao amin'ny tanànan'i La Palma ao amin'ny departemanta atsimon'i Chalatenango, ary izy no fantatra fa nitondra ny harena ara-kolontsain'ny fireneny ho an'ireo olona ao an-tanindrazany sy any ivelany. Tambonin'ny hazo na voan'ny hazo antsona hoe copinol, nanao hosodoko i Llort ary nampianatra ny Naif art, teknika iray entina mampita ireo zavamisy iainana andavanandro eny ambanivohitra sy ireo voninkazo amam-biby mampiavaka azy.
A post shared by Fernando Llort (@fernandollort) on Mar 8, 2020 at 11:31am PDT
Ny tsirairay amin'ireo voanteny ao amin'ilay fango vaovaon'ny “El Salvador” dia vosokitra miaraka amina toejavatra mampiavaka ny asakanton'i Llort.
Mba hamerenana indray sy hireharehàna amin'ny maripanondroana maha-Salvadoriàna, atombotsika androany ny fandefasana ny marika El Salvador fitodian'ireo mpihazatany, nalaina avy amin'ny asakanton'i Fernando Llort.
Ireo voanteny mandrafitra azy dia vosokitra miaraka amina toejavatra avy amin'ny fiainana andavanandro, ny maha-izy azy ny vahoaka, ny natiora, ary ireo loko eto amin'ny firenena.
Ny fanovàna endrika ny fizahantany dia hampiroborobo ireo toerana fitodian'ny mpizahatany, ny kolontsaina ary ireo asakanto sy asatanan'ny eo an-tanàna, tsy misy vàlaka amin'ny Naif art nataon'i Fernando Llort. Ny tanjona dia ny hanampiana amin'ny fanavotana ny indostrian'ny fizahantany izay tena noravaravàn'ilay valanaretina COVID-19.
Heverina ho 440 tapitrisa dolara amerikàna no ho fatiantok'i El Salvador ho an'ny taona 2020 noho ny fitontonganan'ny fizahantany iraisampirenena. Novinavinaina fa hatramin'ny 120.000 ireo asa mivantana na tsia no ho very, hatreto aloha, ho an'ny sehatry ny fizahantany.
Na efa misokatra ho an'ny sidina ara-barotra aza amin'izao fotoana izao ny seranampiaramanidina, tsy dia mbola betsaka ireo vahiny mpizaha tany no tonga mivahiny. Mbola misy hatrany ireo fahasahiranana ilàna fanazavàna momba ny fivahinianana, toy ny fitsirihana PCR tsy maintsy atao eny amin'ireo seranampiaramanidina iraisampirenena. Kanefa, ny “World Travel and Tourism Council” (Filankevitra Erantany ho an'ny Fizahantany sy ny Fivezivezena), WTTC, dia nanasokajy an'i El Salvador ho toerana fitodiana azo antoka ho an'ny fivezivezena, taorian'ny tombana nataon'ny ministera ary nisy fepetra valo momba ny fenitra fiarovana, araka ny nambaran'ny ministeran'ny fizahantany ao Salvador. El Salvador no anisan'ireo firenena voalohany ao amin'ny faritra nahazo io tombokasen'ny fanaraham-penitra io.
Naneho ny fankasitrahany ny ministeran'ny fizahantany i Juan Pablo Llort, zanakalahin'ilay artista Fernando Llort, tamin'ny nampiasàna ny asan'ny rainy tamin'ity marika ity. Voatanisa ao anaty fanambaràna an-gazety nataon'ny ministera izy :
Mankasitraka tanteraka izahay amin'izao fanomezana voninahitra ny rainay izao, Fernando Llort. Tena mahatsiaro ho heni-boninahitra izahay hoe nieritreritra azy ry zareo, hanasongadina ny asany ary hanefy endrika ity marika ity, sady manantena izahay fa ho asehon'io ny ampahany amin'ny endrika mahafinaritra nananan'ny tanintsika.
Tsy hay loatra hoe hatraiza ity marika vaovao ity no afaka hanampy hamelona indray ny indostrian'ny fizahantany. Tamin'ny 2018, Morena Valdez dia nanampy tamin'ny fandefasana ilay tenifanevan'ny fizahantany hoe “El Salvador, Grande Como su Gente” (El Salvador, Goavana tahàka ny Vahoakany ihany), izay nandoavan'ireo Salvadoriàna mpandoa hetra 450 000 dolara amerikàna. Niteraka resabe no niafaran'ilay tenifaneva taorian'ny naha-voampanga ny Interbrand, ilay orinasa notendren‘ny fitondràna hamorona ilay marika, ho nampiasa ny loko sy fotokevitra nangalarina avy aminà fango hafa iraisampirenena mba ho entina mamorona ny fangon'ny El Salvador.
Na fandraharahàna iankinan'ny ain-dehibe ho an'i El Salvador aza ny sehatry ny fizahantany, tsy dia nahasarika loatra ny saina ilay vaovao. Hatramin'izao, miabo saingy zara raha misy ny fanehoankevitra hita ety anaty tambajotra sôsialy momba ilay marika vaovao. Fanakianana mahazatra ny hoe diso nanatsotsotra zavatra loatra ilay famoronana, na hoe ny fampianarana ny vahoaka ny fiteny teratany, ny dihy ary ny fomba fandrary nentindrazana no tena fakàna indray ny maripanondroana hoe El Salvador.
Tsy misy mahafantatra na hahasarika na tsia ireo mpizahatany ho ao El Slvador aorian'ny COVID-19 ilay marika vaovao, nefa tena voadona mafy tamin'ilay valanaretina ny indostrian'ny fizahantany ao El Salvador. Angamba mba mety ho afaka hanampy azy io hiainga indray ny zavakanto nentindrazana.
07 Marsa 2021Mediam-bahoaka